Alika amin'ny saka | Noti saka
Monica sanchez | | aretina, Cheats
Amin'ireo parasy rehetra mety hanelingelina ny saka indrindra dia tsy isalasalana fa izy ireo parasy. Ireo fahavalo kelin'ny alikantsika volom-borona io dia mora miteraka haingana sy haingana, ka raha tsy voafehy ara-potoana izy ireo dia mety harary isika, tsy amin'ny biby ihany, fa ao an-trano ihany koa.
Ho an'ny saka anao, ary koa ho an'ny anao, ny iray amin'ireo zavatra tsy maintsy atao, indrindra amin'ny volana mafana kokoa, dia deworm it manisy «pipette» na bibikely famonoana bibikely hiarovana azy. Ary ny parasy amin'ny saka dia mety miteraka olana maro amintsika izay azontsika hamahana amin'ny tetika homeko anao amin'ity torolàlana ity. Inona koa, hianatra hanao bibikely voajanahary ianao, izay tena hahasoa tokoa raha toa ka tsy mahazaka pipet sy tsifotra simika ny volonao.
1 Inona no atao hoe parasy?
2 Aretina mety hitranga
2.1 Amin'ny olombelona
2.2 Amin'ny saka
3 Ahoana no ahafantarako raha manana parasy ny saka?
4 Fisorohana loza amin'ny saka
4.1 Bibikely simika hiadiana amin'ny parasy amin'ny saka
4.1.4 Sifotra antiparasite
4.2 Bibikely voajanahary
4.2.1 Fanafody an-trano ho an'ny parasy amin'ny saka
4.2.1.1 voasary makirana
4.2.1.2 Masirasira amin'ny labiera
4.2.1.3 Menaka ilaina amin'ny hazo dite
5 Ny zavatra niainako
Inona no atao hoe parasy?
Mba hiadiana amin'ny pesta tsara kokoa dia ampirisihina mafy ny hahafantatra azy tsara. Amin'izay dia ho mora amintsika kokoa ny mamantatra ireo teboka malemy, ary afaka miroso amin'ny fitsaboana fisorohana amin'ny saka amin'ny fotoana mety indrindra isika. Rehefa nilaza izany, Tena fantatsika ve ny atao hoe parasy?
Bibikely kely (tokony ho 3mm ny halavany), tsy misy elatra, an'ny kaomandy Siphonaptera. Mihinana ny ran'ny biby mampinono izy ireo noho ny rafitra am-bava natao handraisana ny ran'ireo mpampiantrano azy, ary toy ny tsy ampy izany dia karazany 2000 no fantatra eran'izao tontolo izao. Manampy trotraka, ny sasany amin'izy ireo dia mamindra aretina mampatahotra toy ny pesta bubonic, typhus na wormorm. Mainty ny lokon'izy ireo, ohatra, ireo izay manelingelina saka dia miloko mena.
Ny tongony dia lava, vonona ny hanao fitsambikinana lehibe (hatramin'ny 34cm amin'ny lafiny marindrano, ary 18cm amin'ny zoro mitsangana). Avy eo, ny biby afaka mandeha lavitra indrindra amin'ny fitsambikinana iray raha oharina amin'ny habeny. Ary satria voafintina avy eo ny vatany, dia afaka mandeha tsy tazana amin'ny volon'ilay mpampiantrano izy.
Bibikely dia bibikely izay miovaova ny fiainany, ary tena mamokatra. Manomboka amin'ny atody ka hatramin'ny olon-dehibe dia afaka roa herinandro mandritra ny volana mafana kokoa, hatramin'ny valo volana raha mangatsiaka ny andro. Manatody atody 20 tsy mampino isan'andro ny vehivavy aorian'ny famahanana; nandritra ny androm-piainany dia tokony ho 600 no hametrahany, izay ho foy mandritra ny 10 andro aorian'ny fametrahana.
Raha mbola olitra izy ireo, tsy miteraka tsy fahazoana aina izanysatria tsy mitsoka rà izy ireo. Ny volon'ondry sy ny hoditra maty, ny tain-parasy ary ny fako hafa ihany no fihinany. Fa afaka andro vitsivitsy dia ho tonga pupae izy ireo, ary ho voaro amin'ny cocoons -n'izy ireo rehefa tonga eo amin'ny sehatry ny olon-dehibe ao anatin'ny 14 andro raha tsara ny andro; raha tsy izany, izany hoe, raha ririnina ary mijanona eo ambanin'ny 10ºC ny mari-pana dia holanin'izy ireo ho toy ny olitra na pupae, ary amin'ny lohataona dia hamarana ny fivoarany izy ireo.
Aretina mety hitranga
Matetika dia tsy miteraka sorisory-mahasosotra amin'ny vahiny ny lozisialy, fa tsy maintsy raisina kosa fa afaka mamindra aretina izy ireo, toy ny pesta bubonic na ny typhus. Ny parasy saka, izay ny anarany siantifika dia Ctenocephalides felisHo fanampin'izany, afaka mandefa ny nanana.
Izy ireo koa dia mety hiteraka tsy fahafaliana mihoatra ny iray amin'ireo namantsika. Ny aretina azon'ny parasy alefa amin'ny saka dia:
Filariasis: izy ireo dia nematode izay mamindra ny sela sy ny fo; raha ny marina dia fantatra amin'ny anarana hoe 'aretim-po'. Ny soritr'aretina dia: kohaka mitaiza, manahirana miaina ara-dalàna, tsy fahazotoan-komana, ary tsy mahita lisany. Raha tsy voatsabo ara-potoana izy io dia tsy maintsy miditra an-tsehatra.
Hemoplasmose: bakteria izy ireo izay misy fiantraikany amin'ny rafi-pitatitra. Ireo saka tratran'aretina dia tsy ho voatanisa intsony, hihena, hanana tazo, ary amin'ny tranga goavambe dia mety ho voan'ny tsy fahitan-kanina.
Dipylidiosis: katsentsitra tsinay fantatra amin'ny hoe tapeworm. Mijanona ao amin'ny tsinain'ny saka izy ary mihinana izay nohaniny. Tsy misy soritr'aretina manan-danja, ankoatry ny mangidihidy amin'ny anal izay hanery anao hipetraka sy handady amin'ny tany.
Dermatitis Allergic Bite Flea Bite (FAD): Io no aretina tsy dia lehibe indrindra amin'ny efatra, fa ny fahita indrindra. Ny fanehoan-kevitra dia mitranga rehefa moka ny ran'ny saka ny parasy, izay hanomboka hangidihidy ary ho may ny faritra voadona, mena ny lokony. Ho fanampin'izay, ho hitanao ny fihakilohany im-betsaka sy ny fikororohana manala ny mangidihidy. Rehefa voan'ny pesta efa mandroso izy, dia ho hitantsika fa misy faritra tsy misy volo eo amin'ny vatan'ilay biby.
Ahoana no ahafantarako raha manana parasy ny saka?
Ny saka manana parasy dia hivadika biby izay mety hanjary hatahotra, tsy hatahotra, ary ho mahery setra mihitsy aza rehefa nandroso be ny infestation. Fa ny famantarana voalohany izay hilaza amintsika fa manana dia izy handany fotoana hikorontana. Azonao atao izany amin'ny hery lehibe, izay mety hiteraka ratra tsindraindray any amin'ilay faritra voadona.
Fomba iray mahomby sy haingana be hahalala raha manana izany amin'ny alàlan'ny fampiakarana ny tohotra amin'ny fampiakarana ny volony. Raha mahita teboka mainty mamirapiratra eo an-damosiny, ao ambadiky ny sofiny, eo am-pototry ny rambony na eo an-kibony ianao, dia tsy hisy safidy hafa afa-tsy ny manafoana azy.
Fisorohana loza amin'ny saka
Satria tsy misy te hanana parasy ao an-tranony ary tsy tokony hijaly azy ireo ny saka, ny tsara indrindra azontsika atao dia ny misoroka azy ireo. Ahoana? Misy fomba roa: zavatra simika y naturalmente.
Bibikely simika hiadiana amin'ny parasy amin'ny saka
Amin'ny fivarotana biby sy toeram-pitsaboana biby dia ho hitanao amidy antiparasite pipettes, collars, pills and spray. Ny tsirairay dia samy manana ny tombony ananany ary koa ny fatiantoka ananany, noho izany dia ho hitantsika amin'ny antsipiriany izy ireo:
Mora be ny mampiditra azy ireo, raha mbola tsy matahotra ny saka 🙂. Tazonina am-pitandremana ilay biby nefa mafy, ny volo dia misaraka amin'ny vozony (any aoriana), ary apetaka ny vokatra. Manana fahombiazana iray volana izy ireo, ary ny marina dia izany tena ilaina izy ireo, indrindra raha mivoaka any ivelany ianao.
Na izany aza, tandremo tsara sao apetraka amin'ny toerana mety hahatratrarana azy, satria raha tsy izany dia mety ho mamo ianao.
Ny vozon'akanjo dia somary mora vidy kokoa noho ny pipettes, ary tena atolotra rehefa te-hahazo antoka fa tsy hahatratra ny saka rehetra ny saka isaky ny mivoaka any amin'ny paozy izy. Izy ireo koa dia mandaitra mandritra ny iray volana, noho izany mandritra ny 4 herinandro farafaharatsiny afaka milamina isika.
Hiseho ny olana raha avelantsika hivoaka. Matetika ireo rojo ireo dia tsy manana fiarovana azo antoka, ary raha mihantona ianao ... Mety hanana olana be aho. Noho izany, raha avelanao handeha izy, dia aza hadino ny mividy rojo miaraka amin'ity karazana clasp ity.
Ny pilina dia be mpampiasa ho toy ny 'vahaolana farany'. Rehefa manan-danja ny famelezana parasy amin'ny saka, na raha matetika ianao dia betsaka, ny pilina dia hanampy anao hanana fiainana milamina kokoa, nefa tsy mila miahiahy bebe kokoa momba ireo katsentsitra ireo. Ny vokany dia mety haharitra 1 ka hatramin'ny 3 na 6 volana miankina amin'ny iray izay omenao azy.
Eny, aza manome iray ho an'ny namanao mihitsy raha tsy mahazo alalana avy amin'ny mpitsabo anaosatria mety hiteraka fihetsika mahazaka sy mampidi-doza io.
Ampiasaina be amin'ny trano famonoana biby, toeram-pialofana biby ary mpiaro amin'ny fahombiazany sy ny vidiny ambany. Safidy tena tsara izy io rehefa te-hihary vola kely isika, ary hitazona ny parasy saka tsy hanafaka.
Fa ... (ny zavatra rehetra dia manana), mitandrema tsara amin'ny maso, orona, vava ary sofinaRaha tsy izany dia mila mitondra azy any amin'ny mpitsabo biby isika mba hijerena azy.
Nandritra ny fotoana fohy izao dia matetika no matetika ny mahita bibikely voajanahary izay tsy miteraka olana amin'ny biby. Collars, pipettes, spray ... izay ampitaina amin'ny fomba mitovy amin'ny zavatra simika, saingy tsy mitovy amin'izy ireo amin'ny maha voajanahary, izany hoe na dia milelaka ny ranon-javatra avy amin'ny pipette voajanahary aza ny saka dia tsy hisy hitranga aminy.
Izy ireo no safidy tsara indrindra ho an'ny saka misy allergy, ary koa ho an'ireo izay mijanona ao an-trano mandritra ny andro. Ny lesoka ihany dia izay ny fahombiazany maharitra kely, noho izany ny fitsaboana dia tsy maintsy averina matetika (matetika, indray mandeha isaky ny 15 andro), ary raha mivoaka any ivelany ny volom-borona dia tsy dia ilaina loatra. Saingy tena lafo tokoa izy ireo, ary ny tena marina dia mendrika hosedraina izy ireo.
Na izany aza, raha tsy te handany vola ianao ary aleonao manao bibikely voajanahary ao an-trano, Eto ianao dia manana fanafody parasy isan-karazany.
Fanafody an-trano ho an'ny parasy amin'ny saka
Tsy tia fofona voasarimakirana mihitsy ireo katsentsitra ireo. Hetezo voasarimakirana ny voasarimakirana iray ary ampangotaho ao anaty vilany. Avelao izy ireo hipetraka mandritra ny alina ary, ny ampitso, miaraka amin'ny lamba na spaonjy, handro ny saka.
Manankarena amin'ny vitamina B1, hitazona ny parasy hiala ny saka. Manampia sotro kely ary afangaro amin'ny sakafo mahazatra anao isan'andro, dia afaka manao veloma ireto parasite pesky ireto ianao mandrakizay.
Menaka ilaina amin'ny hazo dite
Izy io dia iray amin'ireo fanafody voajanahary mahomby indrindra manohitra parasy amin'ny saka, ary mora ampiharina. Makà tsifotra menaka hazo dite, ary ny saka ihany no tsy maintsy aroranao hialana amin'ny fifandraisana amin'ny maso, orona, vava ary sofina.
Fantatrao ve fa ny dite chamomile dia mandroaka parasy? Tsia? Manaova «infusion» ary raha vao mafana ny rano dia mandena spaonjy na lamba ao anatiny ary mamafa azy amin'ny vatan'ilay biby.
Ny zavatra niainako
Ny parasy dia katsentsitra izay tsy maintsy atrehiko isan-taona. Tsy hoe miaro ny saka fotsiny aho, fa ny alikako koa. Tadidiko herintaona, tamin'ny 2010 na mihoatra, dia voan'ny pesta tany an-trano izahay. Iray amin'ireo traikefa ratsy indrindra tamin'ny fiainako io. Tsy maintsy nanasa ny lambam-pandriana rehetra izahay, lamban-databatra, akanjo…, manosotra ny gorodona amin'ny famonoana bibikely isan'andro. Na izany na tsy izany, soa ihany fa tsy nila nantsoina ny serivisy fanaraha-maso ny bibikely, fa ny pipette napetrako tamin'ny saka dia tsy dia nisy vokany firy tamin'io fotoana io.
Amin'ity horonantsary ity dia ho fantatrao ny fomba fanesorana parasy izay mety ao an-trano amin'ny alàlan'ny fanafody ao an-trano:
Tsy afaka milaza aho raha ny bibikely voajanahary na simika no tsara kokoa hiadiana amin'ny parasy amin'ny saka. Miankina betsaka amin'ny toerana ipetrahan'ny biby izany na avela hivoaka na tsia. Raha ny amiko dia tsy nanan-tsafidy afa-tsy ny mametraka pipette simika amin'izy ireo aho, satria rehefa mivoaka izy ireo dia tsy dia manampy azy ireo ny voajanahary rehefa any an-tsaha izy ireo. Fa raha any an-trano foana ny volonao, ny torohevitro dia hoe ataovy voajanaharyAmin'izany no hialanao amin'ny risika tsy ilaina.
Na inona na inona ny vokatra nofidianao dia zava-dehibe izany anontanio ny mpitsabo anao Satria fantany ny tantaran'ny saka anao ary ho afaka hilaza aminao izy hoe iza amin'ireo no mety indrindra aminy.
Tsy misy te-hahita parasy amin'ny saka, fa tsy manan-tsafidy isika zakao araka izay tratrany izy ireo, na amin'ny famonoana bibikely simika, na amin'ny fanomanana ny fanafodintsika manokana ao an-trano.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » aretina » Fleas amin'ny saka
Tiako izy ireo efa ho roa taona. Nametraka shampooing parasy sy parasy parasy aho, manana iray izay tsy navelany handro, omeko sakafo mifangaro meox izy.
Ahoana no hahalalana raha manana parvovirus ny saka
Mieritreritra ve ianao fa mahalala ny zava-drehetra momba ny saka mainty? Avelao hahagaga anao izany